Deluxe Suite-200 yeemitha ukusuka elunxwemeni - I-Airbnb
Deluxe Suite-200 yeemitha ukusuka elunxwemeni
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguFederica
ICasa del Patio yindawo enomtsalane yamagumbi abakhenkethi abekwe kwiDolophu eNdala yase-Estepona.
Estudio 9 ithala omhle ephezu omnye lwezikweri ezininzi umtsalane kwi Old Town, ukuba unalo igumbi labucala, i-intanethi, air conditioning, ukufudumeza, smart TV, ikhitshi zabucala kunye Nespresso umatshini ikofu, heater amanzi, ngetoaster, microwave kunye vitro ukubumba . Kwakhona kunye nepatio yoluntu oluhle lwase-Andalusi, indawo yokuhlamba impahla enomatshini wokuhlamba, isomisi, intsimbi kunye nebhodi yoku-ayina ekhoyo kwiindwendwe (ubukhulu bokuhlamba enye kunye neyomileyo yonke imihla ngesitudiyo ngasinye). Njengoko ikwiDolophu endala, akunakwenzeka ukuqhuba okanye ukupaka. Eyona ndawo ikufutshane yokupaka isimahla imalunga neemitha ezingama-650, indawo yokupaka ehlawulelwayo kwi-175 yeemitha. Isitudiyo ngasinye sibonelela nge-1 (enye) inkonzo yesnack yasimahla ebandakanya: Amanzi, iiSumos, iibhotile ezincinci ezi-2 zeCava, iicookies, iikeyiki zombona / iicereal bars, itshokolethi, itshizi, iham, ijam, ibhotolo, isonka kunye neyogathi.
Idolophu endala yase-Estepona yaziwa ngokuba ngumtsalane, izitrato ezimxinwa ezinezindlu zembali ezijikelezwe ziintyatyambo, imithombo yamanzi kunye nezikwere ezintle kakhulu.
Umbuki zindwendwe ngu- Federica
Siyafumaneka ukuba sijonge ngaphakathi kweeyure eziqhelekileyo. Unokuqhagamshelana nathi ngefowuni okanye nge-imeyile kwaye siya kuphendula ngokukhawuleza. Kwimeko apho awufuni kuqhagamshelana nathi, sinesefu kwiofisi yethu apho unokuqokelela khona izitshixo
Siyafumaneka ukuba sijonge ngaphakathi kweeyure eziqhelekileyo. Unokuqhagamshelana nathi ngefowuni okanye nge-imeyile kwaye siya kuphendula ngokukhawuleza. Kwimeko apho awufuni kuq…